रसियाको रेड स्क्वायर, अवश्य हेर्नुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मास्को, के हेर्ने
40० बर्ष भन्दा माथिका जो कोहीले शीतयुद्धको समय र सोभियत संघले ईभिललाई कसरी व्यक्त गरेको थियो भनेर सम्झनेछ। पूँजीवादको सामना गर्ने त्यस विचारधाराको मुटु मस्कोमा थियो र यदि हामी अझ ठोस ठाउँको बारेमा सोच्न सक्छौं भने हामी यो देशको बारेमा सोच्न सक्छौं रातो वर्ग.
आज रेड स्क्वायर एउटा पहिलो हो, यदि पर्यटकले भ्रमण गरेको पहिलो साईट होईन भने। तर यो के हो? त्यहाँ के देख्न सकिन्छ? यसको इतिहास के हो? यदि तपाईं २०१ World वर्ल्ड कपका लागि रूस जानुहुन्छ भने तपाईं पक्कै पनि यस मार्फत हिंड्नुहुनेछ त्यसैले यहाँ तपाईंसँग धेरै छ जानकारी.
1 रातो वर्ग
2 रातो स्क्वायरमा के हेर्ने
सबै मध्ययुगीन शहरहरू जस्तै, मस्कोको मुख्य वर्ग रहेको छ जहाँ बजार त्यस समयमा आयोजित गरिएको थियो र यो ठीक रेड स्क्वायरको उत्पत्ति हो। शहरको केन्द्रको रूपमा, यो समारोह, सैन्य मार्च, राजाहरूको घोषणा र विद्रोहहरूको दृश्य पनि भएको छ। अवश्य पनि, यसको वास्तुकला पनि शताब्दियौंदेखि धेरै परिवर्तन भएको छ.
वर्गले क्रेमलिनलाई अलग गर्दछ, जुन एक समय शाही किल्ला थियो र आज राष्ट्रपतिको निवास हो, शहरको वाणिज्यिक जिल्ला, कित्ता-गोरोडबाट। यो सँधै महत्त्वपूर्ण भएको छ तर आधुनिक संचार मिडियाको विकास पछि मुख्यतया टेलिभिजन, यो बन्ने प्रबन्धमा छ साम्यवाद को सबै भन्दा क्लासिक छवि। सोवियतहरूले वर्षौंदेखि सैन्य परेड र कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव समातेर यसलाई आफ्नो प्रणालीको प्रतीक बनाए।
वास्तवमा, १ 1945 .XNUMX मा दोस्रो विश्वयुद्धको महान् देशभक्त युद्धमा भएको विजय पछि यहाँ ठूलो परेड थियो। सत्य यो हो कि सोभियतहरूले केही पुराना भवनहरू भत्काइदिए जसले गर्दा उनीहरूको ट्या .्की र राकेटहरूले परेड गर्न सक्थे, यद्यपि भाग्यले ती पुन: निर्माण गरियो। यसको चमक निश्चित रूपमा फर्कियो १ 1990 XNUMX ० मा युनेस्कोले रेड स्क्वायरलाई विश्व धरोहरको रूपमा नाम दियो।
रातो स्क्वायरमा के हेर्ने
यहाँ त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भवन र धार्मिक भवनहरू छन् भ्रमण गर्न। उनीहरूले रूसको महान इतिहासलाई केन्द्रित गर्छन् त्यसैले मलाई लाग्दैन कि तपाईंले ती मध्ये कुनै पनि पाइपलाइनमा छोड्नु पर्छ। धार्मिक भवनहरूमध्ये काजान क्याथेड्रल ओ हो काजानको हाम्रो महिलाको क्याथेड्रल, अर्थोडक्स मन्दिर, १ 1936। मा नष्ट भएको मूल संस्करणको पुनर्निर्माण।
यो मूल चर्च सत्रौं शताब्दीको मिति जब यो वर्जिनलाई पोलिश-लिथुआनियाली सेनाबाट शहर पुनः प्राप्त गरेकोमा धन्यवाद दिन बनाइएको थियो। पहिलो काठबाट बनेको थियो तर आगोले नष्ट गर्दा अर्को ईंटले निर्माण गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यस क्षणलाई ठ्याक्कै याद गर्दै, क्रेमलिनबाट चर्चमा जुलुस निकालिन्छ।
१ 1936 .1990 र १ 1993 XNUMX ० बीच चर्च अस्तित्वमा थिएन, यसलाई ध्वस्त पारिएको थियो, त्यसैले कम्युनिष्टहरूको पतन पछि पुनर्निर्माण गरिएको यो पहिलो स्थान थियो। १ XNUMX XNUMX In मा यो फेरि खोलियो।
El क्रेमिलिन यो फोर्टिफाइड कम्प्लेक्स हो, पूर्व शाही किल्ला, मोस्कवा नदी, रेड स्क्वायर र सेन्ट बासिलको क्याथेड्रल हेराई गर्ने। यसमा पाँच दरबारहरू, टावरहरू, भित्ता र चार क्याथेड्रलहरू सामेल छन्। तसारको पतन पछि सोभियत सरकार पेट्रोग्राडबाट १ 1918 १ from मा मस्कोमा बसाइँ सरे। लेनिन यहाँ आफ्नो समय, पछि स्टालिन, ख्रुश्चेभ र अन्य शासकहरू बसे।
यदि तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईंलाई भन्नेछन् कि क्रेमलिनको टावर र भित्ता १ Italian औं शताब्दीमा इटालियन मास्टरहरूले निर्माण गरेका थिए। आज सब भन्दा अग्लो धरहरा 80० मिटर छ।
क्रेमलिनको केन्द्रमा क्याथेड्रल स्क्वायर हो, त्यहाँ तीन पुराना क्याथेड्रलहरू र सुन्दर सुनहरा गुम्बजहरू छन्। त्यहाँ दुईवटा सानो चर्च र घण्टा टावर छन् इभानको बेल टावर ग्रान्ड 81१ मिटर अग्लो र सत्रहौं शताब्दीको साथ। त्यहाँ केही दरबारहरू पनि छन्, आर्मरी र आर्सेनल ग्रेट पिटरको समयदेखि डेटि। गर्दै।
कम्युनिष्ट युगले लेनिनको मसोलियमलाई पराजित गरेको छ, कम्युनिज्मको डायनासोर जसलाई तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ रिसेट गर्दछ सोवियत नेताको शव लेपन १ 1924 २XNUMX पछि। केही अपवादको साथ, उदाहरणका लागि, युद्ध, प्रदर्शन प्रदर्शनमा सँधै आएको छ। मकबरा ग्रेनाइटबाट बनेको छ र अलेक्सी श्चुसेभद्वारा डिजाइन गरिएको थियो। २०ौं शताब्दीको दौडान लाखौं व्यक्तिहरूले यस साइटको भ्रमण गरेका छन् र भ्रमण जारी छ।
केही समयको लागि स्टालिन यसको नजिक उभिए, ती दुई चिहानहरू थिए, तर आज स्टालिनको एउटा क्रेमलिन पर्खालको नेक्रोपोलिसमा छ। मुख्य कुरा यो हो तपाईं लेनिन मसोलियम भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ म Tuesday्गलबार, बुधवार, बिहिबार, शनिबार र आइतबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म। त्यहाँ सधैं व्यक्तिहरू पर्खिरहेका हुन्छन् त्यसैले तपाईं लाइनमा पर्खनु इच्छुक हुनुपर्दछ। प्रवेश निःशुल्क छ र पुलिस गार्ड छ कि तपाईं भिडियो वा फोटो लिनुहुन्न, वा कुरा वा टोपी लगाउँनुहुन्न। विचार आदर देखाउनु हो।
रेड स्क्वायरमा पनि एक छ डिपार्टमेन्ट स्टोर GUM भनिन्छ। यसको देशभरि यसका धेरै शाखाहरू छन् tsars को समय को लागी मिति, तर मस्को घर सबैभन्दा लोकप्रिय छ। स्पष्टतः ० 90 ० को दशकमा देशको उद्घाटनले स्टोरको शैली बिल्कुल परिवर्तन गर्यो र आज यो सामान्य शपिंग सेन्टर हो। नजिकै अर्को छ किनमेल सानो, TsUM। के GUM भ्रमण गर्न लायक छ? हो।
बाह्य अनुहार लगभग meters०० मिटर लामो छ र यो हो सुरुचिपूर्ण भवन। यो एक trapezoidal आकार र एक धेरै छ इस्पात र गिलासविशेष गरी छतमा। यो एक १ th औं शताब्दी रेलवे स्टेशन को एक स्पष्ट शैली छ। ग्लेज्ड छतको व्यास १ 14 मिटर छ, उदाहरणका लागि, र अनुहारमा फिनिश ग्रानाइट, संगमरमर र चूना पत्थर, मेहरा र पादमार्ग छन्। क्याथरिन दि ग्रेटद्वारा यसको निर्माण इटालियन आर्किटेक्टलाई अर्डर गरिएको थियो र सोवियत समयमा यो १,२०० स्टोरहरू राखिएको थियो, स्पष्टतः राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
स्टालिनले भवनलाई अफिसमा परिणत गरे, छोटकरीमा, र यहाँ पनि एक रहस्यमय आत्महत्या गरेपछि स्टालियनको आफ्नै पत्नीको शव प्रदर्शन गरिएको थियो। आज GUM निजीकृत छ। यसको मिनी संस्करण, उस्तै भव्यता र ईतिहासको साथ, बोल्सोई थिएटरको नजिकमा, TsUM हो।
अर्कोतर्फ पनि छ राज्य संग्रहालय इतिहास, रेड स्क्वायर र मानेज स्क्वायरको बीचमा अवस्थित। यस संग्रहालयमा सबै प्रकारका वस्तुहरू छन् १1872२ मा स्थापना भयो। यसले एघारौं शोरूम र टिकटको लागी प्रति वयस्क 400०० रूबल हुन्छ। त्यहाँ अडियो गाईडहरू छन्, बिभिन्न शीर्षकहरूमा र बिभिन्न मुल्यहरूमा।
अन्तमा, हुनसक्छ तपाई मूर्तिको अगाडि रोकिनुहुन्छ। देशको इतिहासका लागि मूर्ति र मूर्तिकलाको महत्त्व महत्वपूर्ण छ र यस अवस्थामा तपाईले त्यो देख्नुहुनेछ सेन्ट बेसिलको क्याथेड्रल अगाडि मूर्तिकला। यसले राजकुमार दिमित्री पोझर्स्की र कुज्मा मिनिन प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले रूसी सेनाका स्वयंसेवी सदस्यहरू थिए जसले १ --१२ मा पोलिश - लिथुआनियाली सेनालाई मस्कोबाट निष्कासन गरेका थिए। यो ऐतिहासिक घटनाको २०० वर्षको स्मृतिमा त्यहाँ राखिएको थियो र कांस्यले बनेको छ।
यो सबै थाहा पाएर तपाइँ रेड स्क्वायरको बिचमा खडा हुन तयार हुनुहुन्छ अलि बढी जान्न तपाईका आँखाहरुले के देख्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » मास्को » रसियाको रेड स्क्वायर, अवश्य हेर्नुहोस्